DIIWAANKA POSKY Bombardier CRJ 900 FSX - Rikoooo
downloads 28 735
An add-on leh nooc duulimaad ah iyo qaabeyn tayo sare leh oo la jaan qaada nooc kasta oo ah FSX. Waxaa kujira seddex qoraal oo kala ah: Midabada Guryaha rasmiga ah, NWA Airlink, America West Express. Hubso inaad aqriso buugga kadib rakibidda.
Tilmaanta guud ee diyaaradaha dhabta ah:
CRJ900 Bombardier waxaa loogu talagalay in ay qabtaan rakaab 86-90 in qaabeynta 4-socodka joogtada ah leh laba layr oo ayan huuriyo ah sida qalabka caadiga ah. Waxa kale oo la qaybiyay kartaa optional 3-socodka joogtada ah fadhiga ganacsi-fasalka.
Bombardier horumariyo a winglet weyn oo cusub oo aerodynamics wanaajiyey ee CRJ900 in ay siin duushay fiican, fuulid, safar iyo waxqabadka degtey iyo sidoo kale yaraynta gubashada shidaalka.
Bombardier Aerospace bixisaa versions of 3 CRJ900 ah: CRJ900 calanka, ER CRJ900 iyo CRJ900 LR. version caadiga ah waxa uu leeyahay miisaan badnaan duushay of pounds 80,500 (36,504 kg) iyo kala duwan oo ka mid ah nm 1,350 (1,554 SM / 2,500 km). The Extended Range (ER) duwanaansho ayaa miisaan badnaan qaadataan-off of pounds 82,500 (37,421 kg) iyo duwan ee 1,593 nm (1,833 SM / 2,950 km). The Long Range (LR) model leeyahay miisaan badnaan qaadataan-off of pounds 84,500 (38,330 kg) iyo kala duwan oo ka mid ah 1,828 nm (2,104 SM / 3,385 km). CRJ900 waxa uu leeyahay qaab ciyaareed aad u fiican, oo awood u xawaare safar max of Mach 0.83 (475 kts / 547 mph / kph 881), iyo Joogga safar ilaa 41,000 cagaha.
CRJ900 Bombardier waxaa ku shaqeeya by laba General Electric CF34-8C5 turbofan matoorada in ay soo saaraan pounds 14,510 (63.2 Kn) ee ku riixdaan qaadataan-off. Kuwani isla matoorada sidoo kale awood u CRJ700 iyo CRJ705, jidaynayey for midka weyn oo u dhexeeya xubnaha qoyska. Asal ahaan loogu talagalay Air Force ee United States, qoyska CF34 uu leeyahay in ka badan 20 million saacadood duulimaadka iyo si weyn loo arkaa mid ka mid ah powerplants ugu kalsoonaan karo oo hufan dhisay. Waxa intaa dheer in isagoo shidaalka hagaagtay iyo qaboojinta-oolnimada, Taxanaha CRJ900 Bombardier ee 'powerplant samatabbixiyaa baqshadda qaab u dhigma in ka mid ah diyaaradaha mainline.
CRJ900 waa cagaha 118, 8 inches (36.2 m) dheer taako garabka of 81 cagaha 6 inches (24.9 m) a.
Author: Project Open Sky
Bombardier CRJ-200 Xirmooyin buuxa FSX & P3D 1.1